प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : वाग्मती र आर्मी विजयी - sailungonline
४ माघ २०७७, आईतवार २०:५१ । काठमाडाैं
चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा वाग्मती प्रदेश र नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब आ–आफ्नो खेलमा विजयी भएका छन् । वाग्मतीले नेपाल पुलिस क्लबलाई सात विकेटले तथा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई ८० रनले पराजित गरेको हो ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको पुलिसले २९ दशमलव तीन ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १११ रन बनायो ।
जितका लागि ११२ रनको सामान्य लक्ष्य वाग्मतीले ३४ दशमलव चार ओभरमा तीन विकेट गुमाएर पूरा ग¥यो । वाग्मतीका लागि उपकप्तान पृथु बास्कोटाले अविजित ४८ रन बनायो । यस्तै इशान पाण्डेले अविजित १७, आदिल खानले १२ तथा पारस खड्काले १७ रन बनाये । बलिङतर्फ पुलिसका दीपेन्द्रसिंह ऐरी र ललितनारायण राजवंशीले एक एक विकेट लियो ।
यसअघि ब्याटिङ गर्ने क्रममा पुलिसका लागि सुनिल धमलाले १७, आरिफ शेखले २१ र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले २१ रन बनायो । बलिङतर्फ वाग्मतीका नन्दन यादव र तिलकराज भण्डारीले चार चार तथा रामनरेश गिरीले दुई विकेट लियो ।
यसैगरी मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आजै सम्पन्न खेलमा आर्मीले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । आर्मीले कर्णालीलाई ८० रनले हरायो ।
जितका लागि १९६ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको कर्णालीले ३३ दशमलव तीन ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै ११५ रन बनायो । कर्णालीका कप्तान रविन्द्रजङ्ग शाहीले सर्वाधिक ३०, हेमन्त ओलीले १६ तथा दीनेश अधिकारीले १२ रन बनायो । बलिङतर्फ आर्मीका लागि सुशन भारीले चार, साहब आलमले तीन, रोहित पौडेलले दुई तथा हरि चौहानले एक विकेट लियो ।
यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्दै आर्मीले ४३ दशमलव एक ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १९५ रन बनाएको थियो । आर्मीका लागि अनिल मण्डलले ११४ बलमा १४ चौकासहित ८९ रन बनायो । यस्तै कप्तान विनोद भण्डारीले ५५ बलमा तीन चौका र एक छक्कासहित ४१, रोहित पौडेलले ११, लोकेश बमले १३ र राजेश पुलामीले १६ रन बनायो । बलिङतर्फ कर्णालीका दिवान पुन, राज शाह र दिनेश अधिकारीले दुई दुई तथा रविन्द्रजङ्ग शाही, अनुज चुनरा र युनिस सिंहले एक एक विकेट लियो ।
निजगढ मेयर कप : एफसी कोलगाउ क्वार्टरफाईनलमा
१. धुलिखेल बसपार्क
२. गायिका अञ्जु पन्त विवाह बन्धनमा
३. प्रचण्ड–नेपाल पक्षद्वारा आफ्ना सांसदहरुलाई तत्काल उपत्यका नछाड्न निर्देशन
४. पूर्वाधार समाचार सङ्कलनमा खोजी पत्रकारिता गर्नुपर्ने
५. हुबहु कपि पेष्टले लोकप्रियता गुमाउछ: उपसभामुख तामाङ
६. नेकपा ओली समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने